Fitaovam-pitaterana vovo-dronono matavy - AASraw vovoka
/ Products / Vovoka very tavy
Fitaovam-pitaterana vaky volo isika, Vovonam-bolo vidy mba hivarotana, Araka ny efa nampanantenaintsika, ny vovobony vatsinay dia ny fahadiovana tsy latsaky ny 98%.
Maro ireo vahaolana samihafa lozisialy any.
Anisan'izany ny karazana pilina, zava-mahadomelina ary fanafody voajanahary.
Voalaza fa manampy anao handany lanjany izany, na farafaharatsiny mba hampihena ny lanjany miaraka amin'ny fomba hafa.
Miasa amin'ny alalan'ny iray na maromaro amin'ireto rafitra ireto izy ireo:
Ajanony ny fialan-tsiny, mahatonga anao hahatsapa bebe kokoa mba hihinanao kalôria vitsy kokoa
Ampiheno ny fihenan-tsakafo ny vovo-dronono toy ny tavin-kena, ka mahatonga anao hihinana tsikelikely
Ampitomboy ny fofona matavy, manaova kalozia bebe kokoa
Afaka manolo ny fikarakarana ara-batana sy ny fahazarana misakafo ara-pahasalamana ve ny fanafody?
Ny fanafody dia tsy manolo ny fikarakarana ara-batana na fahazarana misakafo ara-pahasalamana ho fomba iray handoavana lanja. Ny fandinihana dia mampiseho fa ny fanafody mampidi-doza dia miasa tsara raha ampifandraisina amin'ny fandaharam-piainana. Anontanio ny dokotera na ny mpitsabo hafa momba ny fomba fitandroana ny fomba fitantanana ny lanjan'ny weight management izay hiasa ho anao.
Inona avy ireo tombontsoa amin'ny fampiasana fanafody prescription mba tsy hananana lanjany?
Raha ampifandraisina amin'ny fiovan'ny fitondran-tena, anisan'izany ny fihinanana sy ny fahazarana miasa, dia mety manampy ny olona sasany handany lanjany ny fanafody. Amin'ny ankapobeny, ny olona mitondra fanafody fitsaboana amin'ny sehatry ny fomba fiainana dia very eo anelanelan'ny 3 sy 9 isan-jato mahery noho ny lanjany ho an'ny vatany raha oharina amin'ny olona amin'ny fandaharam-piainana tsy misy fanafody. Ny fikarohana dia mampiseho fa ny olona sasany mitaky fanaintainana-lany fanafody dia very 10 isan-jato na mihoatra noho ny lanjany. Ny vokatry ny varotra dia miovaova amin'ny medikaly sy ny olona.
Ny fahaverezan'ny 5 ka hatramin'ny 10 isan-jato amin'ny lanjan'ny vatanao dia mety hanampy amin'ny fanatsarana ny fahasalamanao amin'ny fihenan'ny siramamy ao amin'ny ra, ny tosidra sy ny triglyceride. Ny fahaverezan'ny lanja ihany koa dia afaka manatsara olana hafa momba ny fahasalamana mifandraika amin'ny lanjany be loatra sy ny atin'ny rongony, toy ny fanaintainan'ny aretin-tsaina na ny aretin-tory. Ny ankamaroan'ny fahavoazana dia mitranga ao anatin'ny volana voalohany 6 amin'ny fanombohana ny fanafody.
Ity ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny fanafody famoahana lanja mavesatra indrindra: Orlistat vovoka, poeta Bitter Orange / Synephrine, vovoka Sibutramine, vovoka Clenbuterol HCL, vovoka Phentermine, ary vovo-dronono Lorcaserin HCL, vovoka Cetilistat.
1. Orlistat vovoka
Ordratotra Orlistat dia fanafody famonoana fanafody, namidy teo ambanin'ny anarana hoe Alli, ary eo ambanin'ny prescription as Xenical. Orlistat, izay antsoina koa hoe Alli na Xenical, dia afaka mampihena ny habetsahan'ny siramamy avy amin'ny sakafo ary manampy anao hihena. Manana fiantraikany maro izy io, ny sasany amin'izy ireo dia tena tsy mahafinaritra.
Ny mahasamihafa, ny sakafo karba ambany (tsy misy zava-mahadomelina) dia hita fa mahomby toy ny poids orlistat sy ny sakafo tsy mihinana sakafo mifangaro.
2. Bitter Orange / Synephrine vovoka
Ny karazana menaka antsoina hoe bitter orange dia ahitana ny vovoka synephrine. Ny vovoka synephrine dia mifandraika amin'ny ephedrine, izay efa lasa be mpitia tao amin'ny famarotana fanafody samihafa.
Ny vovony synephrine dia tsindrin-tsakafo maivana, ary mety mahomby amin'ny fahaverezan'ny lanjany mandritra ny fotoana fohy. Na dia izany aza, ny vokatra hafa dia mety ho lehibe, noho izany dia tokony ampiasaina amin'ny fampitandremana henjana izany.
3. vovoka Sibutramine
Ny vovon-tsakafo Sibutramine dia misy fiantraikany eo amin'ny chimique ao amin'ny atidoha izay miteraka fiarovana. Ny vovoka Sibutramine dia ampiasaina miaraka amin'ny fihinanana sakafo sy fanatanjahan-tena mba hikarakarana ny atody izay mety mifandray amin'ny diabeta, ny kolesterola avo, na ny tosidra ambony.
Ny vovoka Sibutramine dia azo alaina na tsy misy sakafo. Tokony ho very farafaharatsiny 4 kilao mandritra ny herinandro voalohany 4 ny fanondranana tsimokaretina sibutramine ary hihinana sakafo misy kaloria ambany. Lazao amin'ny dokotera raha tsy mahavaky farafaharatsiny 4 pounds ianao aorian'ny fitsaboana azy mandritra ny herinandro 4.
4. Clenbuterol HCL poids
Ny vovo-dronono Clenbutrol HCL dia famenony izay manandrana maka tahaka ny fihenan'ny tavy sy ny fihenan'ny lanjan'ny vovoka Clenbuterol HCL. Ny valin'ny vovok'i Clenbuterol's HCL dia mahavariana ary notohanan'ny andiana olo-malaza sy atleta maro, toa an-dry Jessica Hardy sy Victoria Beckham. Mandoro tavy amin'ny "fampitomboana ny tahan'ny fihenan'ny tavy amin'ny vatana raha mampitombo ny tahan'ny metabolika basal an'ny vatana" - amin'ny teny hafa, io no fanafody mampihena lanja tanteraka.
Mba hividianana ny fatiantoka ara-pahasalamana / fahampian-tsakafo dia tokony ho malina indrindra, indrindra amin'ny fividianana iraisam-pirenena amin'ny aterineto. Misy loharanom-baovao maromaro milaza ny hanomezana entam-barotra marary, fa natao ho mpanadina. AASraw dia manome sy manome fotsiny ny entam-be.
Haneho izay 16 valiny
Powder acetate 6-Dehydronandrolone (2590-41-2)